Maalinta Asturnaanta ee Macluumaadka: Sababta Daryeelka iyo Waxa la Sameynayo - Iskuulka ITS Tech
Macluumaadka Khaaska ah ee Maaliyadeed: Sababta Daryeelka iyo Waxa la Sameynayo
Marka la eego marka Golaha Wakiilada Maraykanku soo dhaweeyeen S. Res. 337, go'aamo aan ku xirnayn oo la xidhiidha taageerada loogu talagalay in lagu qoro "Maalin Macluumaad Qaran oo Maaliyadeed" ayaa lagu arkay Janaayo 28, ma jirin wakhti aad u badan oo lagu helayo ereyga, inkastoo xaqiiqda ah in munaasabadu ay ahayd mid waxoogaa yar.
Si kastaba ha ahaatee, taasi waa taariikhda aan markii ugu horeysay ee aan si qoto dheer uga fikiro Maalinta Asturnaanta Macluumaadka, iyo sanadaha ka dambeeya qaybta biilka, waxaan ahaa qof heysta shakhsi ahaan ilaalinta macluumaadka iyo ku darno amniga xogta shaqada.
Go'aanka Janaayo 28 ma jirin wax shaki ah. Taariikhdaas oo ku taal 1981, Golaha Yurub wuxuu qabtay Heshiis loogu talagalay Ilaalinta Shakhsiyaadka Kaga Qaadan Gaadhiga Gaariga ah ee Macluumaadka Shakhsiyeed. Nasiib wanaag, waxay u soo gaabsadeen magaca wakhti munaasab ah waxaana lagu calaamadeeyay Axdiga 108, kan ugu weyn ee xaddidaya gorgortanka guud ee maareynta amniga iyo hubinta xogta.
Maalinta Asturnaanta Maaliyadeed waxay bilawday Maraykanka intee in ka badan, Kanada bishii Janaayo 2008 iyada oo ah soo koobidda Maalinta Ilaalinta Macluumaadka Maalinta ee Europe. Munaasabadda caalamku waxay horumarinaysaa miyir-qabka iyo hababka ugu fiican ee hubinta macluumaadka. Iyadoo laga eegayo wadamada Maraykanka, Canada iyo 27 Yurub, Waxqabadka Tababarka Macluumaadka Maaliyadeed ayaa ah inay xoogga saaraan keenista arimaha iftiinka macaamiisha iyo ururada muhiimada ilaalinta macluumaadka ay ku leeyihiin shabakadda. Tani waxay u muuqatay in ay si aad ah muhiim u tahay maadaama ay tahay shakhsi qof isgaarsiineed uu sii ballaariyay sanadka oo dhan inta uu ku maqan yahay nabadgelyada.
Maalinta Xogta Macluumaadka Khaaska ah waxay u badan tahay inay baraan oo ay hawlgalaan ururada, dukaamada iyo qoysaska leh barashada iyo hababka ugu fiican si ay si ka wanaagsan u gaarsiiyaan barnaamijyada, infakshanka iyo khayaanada keeni kara macluumaadkooda halis. Maalinta Xogta Ilaalinta (Data Protection Day) waxay isku keentaa dadka cusub iyo sidoo kale hay'adaha dawliga ah, macalimiinta, kuwa ay ku jiraan hay'adaha samafalka iyo kuwa horjoogayaasha ah ee iskaleh goobaha warshadaha.
Haddaba maxaad ka qaban laheyd ammaanka macluumaadka? Fursadaha loo yaqaan 'Secure' ee macluumaadkaaga iyo ilaalinta arrimuhu adiga kugu saabsan, Maalinta Xogta Ilaalinta (Data Privacy Day) waa waqti aan caadi ahayn si aad u bilowdo si wax ku ool ah xaqiijinta macluumaadkaaga. Target, Sony iyo Yahoo dhammaantood waxay ku qaateen sida ugu adag ee suurtogalka ah. Waa faa'iidada ugu weyn ee ganacsi kasta oo ku shaqeynaya maareynta xogta weyn ama waxay noqon doontaa sheekada hoggaamineed ee soo socda ee ku yaala CNN ama waxyaabaha soo socda ee ku yaal New York Times. Iyadoo aan loo eegin haddii ay tahay bangiga, takhasuska, dukaanka dawooyinka ama xitaa goobta shaqada, ku boorin inay si ammaan ah u hubiyaan macluumaadkaaga. Marna ma aqbalo Xogtaada la hubiyay. U noqo u doodahaaga amnigaaga gaarka ah.
Isbahaysiga Nabadgelyada Qaranka ee Qaranka wuxuu qabanqaabiyaa horumarinta Layliga Maalinta Khaaska ah ee Macluumaadka. Waa kuwan qayb ka mid ah waxyaabaha ay nagu boorinayaan inaan sameyno si aan u hormarinno Maalinta Maalinta Gaarka ah:
Mingle it. Si loo xaqiijiyo macluumaadkaaga gaarka ah, uma baahnid inaad ka baqdid shabakada internetka ee ku saleysan shabakadda. Talooyinka badbaadada Tweet Farriimaha boostada ee Facebook iyo xisaabta LinkedIn. Waxaad isticmaali kartaa Maalinta Xogta Macluumaadka ee rasmiga ah ee haqab-beelka #PrivacyAware iyo ka dib @DataPrivacyDay si aad u sii ahaato qaabka laysugu daro qaybta ugu muhiimsan ee macluumaadka Maalinta Xogta Maaliyadeed ee ugu dambeeyey si aad ugu gudbiso ururradaada iyo dadkale.
Samee rasmi ah. Waxaad kugula talin kartaa ururkaagu inuu muujiyo taageeradiisa Maalinta Gaarka ah ee Macluumaadka adigoo u soo jeestay hannaan rasmi ah oo ku saabsan taariikhda Asturnaanta Maaliyadeed. Sanad ka hor, in ka badan ururada 450 waxay uqalmiyeen Maalin Khaas Ah Maaliyadeed. Waa mid dhib iyo fudud si ay ugu biiraan.
Samee shakhsi. Ilaalinta xogtu waxay ka bilaabataa guriga, markaa hubi in saaxiibadaa iyo qoyskaaga ay ogaadaan khatarta ay ku hayaan xogahooda, gaar ahaan carruurta iyo dhallinyarada laga yaabo in laga yaabo in ay ilaalinayaan marin habab warbaahineed oo ku salaysan shabakadda. Ku dhaji xogtaada ku saabsan fursadda aad u leedahay diiwaanka labada dhinac ee kombuyuutarkaaga, kaniiniyada ama TV-gaaga oo la xiriiraya warbaahinta interactive sida Netflix, Hulu, Amazon Prime iyo iTunes.
3 Qodobbada Muhiimka ah ee Laga Yaabo inay ka fogaato Naqshadaynta Farsamada IT
Waa maxay Routing? - Qeexida Wadada | Isgaadhsiinta